ငါ့နှလုံးသားဟာ တစ်ဖန်ပြန်နွေးထွေးပြီး ပန်းတွေ ဖူးပွင့်လာမှာပါဆိုတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး – Suehninsi
Sue | May 27, 2020 | ရသစုံ | No Comments
အသက်နဲ့မလိုက်အောင်လှရက်လွန်းတဲ့ နန်းစုရတီစိုးကတော့ မင်းသမီးတစ်လက်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်စားတတ်သလို နုပျိုနေတဲ့အလှတရားတွေကြောင့်လည်း ပြောစမှတ်တွင်ရတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်လို နုပျိုလန်းဆန်းနေတဲ့အလှတရားတွေနဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေကို ပရိသတ်ကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “အေးစက်တဲ့လေပြေတွေတိုက်ခတ်ပြီးရင် နွေဦးရောက်လာမှာပါ…လှပတဲ့ပန်းလေးတွေ
ထပ်ပွင့်လာမှာပါ…ငါ့နှလုံးသားဟာ တစ်ဖန်ပြန်နွေးထွေးပြီး ပန်းတွေဖူးပွင့်လာမှာပါ”ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားပါသေးတယ်။ နန်းစုကတော့ အဆိုတော်G Fatt နဲ့စုံတွဲတွေအဖြစ် လူသိရှင်ကြားဆက်ဆံရေးကနေ တစ်ခန်းရပ်သွားတာလည်း
မကြာသေးပါဘူး။နန်းစုရဲ့ကဗျာဆန်ဆန်စာသားတွေကတော့ ပရိသတ်တွေကို သို့လောသို့လောထင်စေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းလှနေတဲ့အပျိုကြီးမမနန်းစုတစ်ယောက် နှလုံးသားတွေနွေးထွေးပြီး ပန်းတွေပွင့်စေဖို့ အကြောင်းတွေများရှိနေပြီလားနော်….
အသကျနဲ့မလိုကျအောငျလှရကျလှနျးတဲ့ နနျးစုရတီစိုးကတော့ မငျးသမီးတဈလကျလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဖကျရှငျကကြဝြတျစားတတျသလို နုပြိုနတေဲ့အလှတရားတှကွေောငျ့လညျး ပွောစမှတျတှငျရတဲ့ သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျလေးတဈယောကျလို နုပြိုလနျးဆနျးနတေဲ့အလှတရားတှနေဲ့ အမိုကျစားဓာတျပုံတှကေို ပရိသတျကိုမြှဝလေိုကျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ “အေးစကျတဲ့လပွေတှေတေိုကျခတျပွီးရငျ နှဦေးရောကျလာမှာပါ…လှပတဲ့ပနျးလေးတှေ
ထပျပှငျ့လာမှာပါ…ငါ့နှလုံးသားဟာ တဈဖနျပွနျနှေးထှေးပွီး ပနျးတှဖေူးပှငျ့လာမှာပါ”ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ နနျးစုကတော့ အဆိုတျောG Fatt နဲ့စုံတှဲတှအေဖွဈ လူသိရှငျကွားဆကျဆံရေးကနေ တဈခနျးရပျသှားတာလညျး
မကွာသေးပါဘူး။နနျးစုရဲ့ကဗြာဆနျဆနျစာသားတှကေတော့ ပရိသတျတှကေို သို့လောသို့လောထငျစတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ အရမျးလှနတေဲ့အပြိုကွီးမမနနျးစုတဈယောကျ နှလုံးသားတှနှေေးထှေးပွီး ပနျးတှပှေငျ့စဖေို့ အကွောငျးတှမြေားရှိနပွေီလားနျော….
Source : Nann Su Yati Soe’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
သိန်း(၃၀၀)တန် ကားတစ်စီးလောက်နဲ့တော့ စပွန်ဆာယူစရာအကြောင်းမရှိပဲ သိန်းထောင်ချီတန်ကားအကြီးကြီးပဲ ယူလိုက်မယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့တဲ့ နီလန်း